वर्षौदेखि ट्रायजेमिनल न्यूरालजिया नामको रोगबाट पीडित छन् सलमान खान – Patrika Nepal
वर्षौदेखि ट्रायजेमिनल न्यूरालजिया नामको रोगबाट पीडित छन् सलमान खान
पुष ३०, २०७८ शुक्रबार 25
काठमाडौं । भारतीय टेलिभिजन शो ‘द कपिल शर्मा शो’मा अभिनय गरिसकेका कमेडियन तीर्थानन्दले हालैमात्र आत्महत्या गर्नका लागि विष सेवन गरेका थिए । छिमेकीको सहयोगले तीर्थानन्दलाई अस्पताल लगियो, जहाँ उनको उपचारपछि ज्यान बच्यो ।१५ वर्षदेखि बलिउडको हिस्सा रहँदै आएका यी कमेडियन कोभिडका कारण आर्थिक संकटमा परेपछि आत्महत्याको बाटोतर्फ जान लागेका थिए । बलिउडमा तीर्थानन्द भन्दाअघि कयौं ठूला स्टारहरूमध्ये केहीले आफ्नो परिस्थितिबाट हार मान्दै र केहीले भने बिरामीका कारण आत्महत्याको सोच बनाइसकेका छन् ।
अभिनेता अध्ययन सुमन एक समय डिप्रेसनको शिकार भएका थिए । लबी कल्चरको शिकार भएपछि उनलाई फिल्मबाट हटाउन थालिएको थियो । यही समयमा उनी अभिनेत्री कंगना रनावतबाट पनि अलग्गिएका थिए ।कंगनासँग पुरानो सम्बन्धलाई सुचारु गर्न उनलाई निकै समस्या भएको थियो । उनका पिता शेखर सुमनले एक अन्तर्वार्तामा छोराले आफूलाई पटकपटक आत्महत्या गर्न मन लागेको कुरा बताउने गरेको खुलासा गरेका थिए ।
अभिनेता मनोज बाजपेयी नेसनल स्कूल अफ ड्रामामा भर्ना हुने सपना देख्दथे । तर, स्कूलले अस्वीकार गरेपछि उनले आत्महत्याको सोच बनाएका थिए । मनोजले आत्महत्या गर्लान् भन्ने डरले उनका सबै साथी मनोजसँग बस्न थाले, ताकि मनोजले आत्महत्या गर्न नसकून् ।टेलिभिजन अभिनेत्री शमा सिकन्दरले पनि आत्महत्याको प्रयास गरिसकेकी छन् । राजधानि दैनिकमा खबर छ । डिप्रेसनका कारण उनले एक रात कयौं निन्द्राको औषधि खाएकी थिइन् । औषधि खाएपछि उनले आमालाई बिहान नउठाउनु भन्दै भाइलाई आफ्ना सबै बैंक एकाउण्टको जानकारी पठाएकी थिइन् ।
आधा रातमा शंका लागेर भाइले आमालाई बोलाएका थिए । त्यसपछि कोठामा पुग्दा शमा बेहोस् अवस्थामा थिइन् । उनलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिएको थियो । जसकारण शमाको ज्यान बच्यो ।अभिनेता तथा कमेडियन जोनी लिभरको बाल्यकाल संकटमै बित्यो । उनको पिता मदिराप्रेमी थिए, जसकारण जोनी सडकमा डटपेन बेचेर पैसा कमाउँथे । यही समस्याले गर्दा एकदिन जोनीले आत्महत्या गर्ने मन बनाएका थिए । तर, परिवारलाई सम्झिएर आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरे ।अभिनेता सलमान खान वर्षौदेखि ट्रायजेमिनल न्यूरालजिया नामको रोगबाट पीडित छन् । यो बिरामीलाई सुसाइड डिसिज पनि भनिन्छ । यो बिरामीबाट पीडित व्यक्तिको नशामा असहनीय दुखाइ हुन्छ । एक अन्तर्वार्तामा सलमानले यही रोगका कारण आफ्नो दिमागमा कयौं पटक आत्महत्याको सोचाई आएको खुलासा गरेका थिए ।
टेलिभिजन अभिनेत्री जस्मिन भसीनले करियरको सुरुवातमा कयौं अस्वीकारको पीडा झेल्नुप¥यो । उनको अनुहारको रंग नराम्रो भएकै कारण धेरै ठाउँ उनले बेइज्जतको सामना गर्नु परेको थियो । एक समय उनले आत्महत्याको पनि प्रयास गरेकी थिइन् ।
Prevबलिउडका हुनाहार अभिनेता अनिल कपुर र रणवीरसँग फिल्म खेल्न पाउँदा खुशीले फुरुगं छन् बिपिन कार्की
Nextहरिवंशको गीत ‘कर्कलो कोक्याउला’ हेरेर जब आईजीपीले आँसु झारे…
मधुमेहका रोगीले खानैपर्छ यी नौ खानेकुरा, नत्र शरीरमा हुन्छ यस्तो खतरा !
काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रकको ठक्करबाट छोरीको मृत्यु, घाईते आमाको कस्तो छ अवस्था ?
कुटनैतिक नियोगमा बसेर वैदेशिक रोजगारको दलाली, प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी दिने तयारी